आइतबार सवा १२ अर्बको ट्रेजरी बिक बोलकबोल हुने - Birgunj Sanjalआइतबार सवा १२ अर्बको ट्रेजरी बिक बोलकबोल हुने - Birgunj Sanjalआइतबार सवा १२ अर्बको ट्रेजरी बिक बोलकबोल हुने - Birgunj Sanjal
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १६:४०
वीरगन्ज नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १२ अर्ब २६ करोड बराबरको ’ट्रेजरी बिल’ बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आइतबार बोलकबोलबाट उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । आइतबार बोलकबोल भएर मंगलबार ट्रेजरी बिल इस्यु हुने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि सो बराबरका ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो ।
गैर प्रतिस्पर्धी बोलकबोलकर्ताहरुका लागि १५ प्रतिशत छुट दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
सरकार वा राष्ट्र बैंकले आन्तरीक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने एक प्रकारको ऋणपत्रलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ । यो २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधीको हुन्छ । यी बिभिन्न प्रकारका ट्रेजरी बिल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्दै आएको छ ।
ट्रेजरी बिल कुनै व्यक्ति वा वित्तिय संस्थाले बोलकबोल गरेर किन्न सक्छन् । उक्त बोलकबोल बहुबोल मूल्य विधि मार्फत गरिन्छ ।
साथै, ट्रेजरी बिलमा ब्याजदर भन्दा पनि सट्टा छुटदर माथि बोलकबोल हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा वित्तिय संस्थाले सरकारलाई रू. १ करोडको ट्रेजरी बिल किन्दा छुट सहित ९५ लाख दिन सक्छन् । तर, पछि उनीहरुले अवधी सकिएपछि एक करोड रुपैयाँ नै पाउछन् ।